11/05/13 ~ Myanmar Forward
အိုင်ဒီယော်လော်ဂျီသမိုင်း နိဂုံးချုပ်ချိန်နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာမှ စီးဆင်းလာသော ခွန်အားများ
Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံတို့မှ ခေါင်းဆောင်များ စုဝေးရာ လိုင်ဇာ အစည်းအဝေးသို့ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးက သဝဏ်လွှာ ပေးပို့ခဲ့သည်။ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက် လက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်ရန်၊ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှု မူဘောင် ချမှတ်နိုင်ရန်နှင့် နိုင်ငံရေး ဒိုင်ယာလော့ဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်နိုင်ရန် ထားရှိသော မျှော်လင့်ချက်ကို အထင်အရှား ပြသခဲ့သည်။ လွတ်လပ်ရေးနှင့်အတူ ပေါက်ဖွားလာခဲ့သော ပြည်တွင်းစစ် မီးလျှံတို့သည် နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော် နိုင်ငံ တည်ဆောက်ရေးကို ကြီးမားသည့် သက်ရောက်မှုများ ရှိခဲ့သည်။ တောင်ပံ မဖြန့်နိုင်ရှာသည်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သော ချိုးဖြူငှက်တို့သည်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးတေးကို မသီနိုင်ကြတော့ပါ။
အိုင်ဒီယော်လော်ဂျီသမိုင်း နိဂုံးချုပ်သည့် ခေတ်
ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရေးသည် မလွယ်ကူလှဟု ခေတ်အဆက်ဆက် နားလည် မှတ်သားခဲ့သော ငြိမ်းချမ်းရေး အတွေးအခေါ်တို့မှာ မဖြစ်မနေ အသွင်ကူးပြောင်းရန် လိုအပ်နေပြီ ဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းဖို့ အခြေခံဥပဒေကိုပင် ပြင်ဆင်ရေးအထိ လမ်းဖွင့်ထားပြီး ဖြစ်သော မျက်မှောက် နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းတွင် နိုင်ငံရေး အိုင်ဒီယော်လော်ဂျီတို့၏ တိုးတိုက်မှုများ မတွေ့ မမြင်ကြရတော့ပေ။ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး ဗိသုကာ ဦးသန့်လို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး ထွန်းကားရာ မြန်မာ့မြေသည် ယနေ့တိုင် စစ်မီး မငြိမ်းနိုင်သေးသည်မှာလည်း အမှန်ပင် ရင်နာစရာ ကောင်းနေသည်။ လွတ်လပ်ရေး ရရှိပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြသော Ideology Clash များ၊ အကျိုးစီးပွား ထိတိုက်တိုးမှုများသည် အမျိုးသားညီညွတ်ရေး ပြိုကွဲစေခဲ့သော အကြောင်းတရားများဟု ဆိုနိုင်ပေသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး လက်ထက် အမျိုးသားညီညွတ်ရေး၊ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် များတွင် သိသာထင်ရှားသည့် ခြားနားမှုမှာ အုပ်ချုပ်သူဘက်က ချမှတ်သည့် အိုင်ဒီယာကို အခြေခံသော၊ မိမိ စိတ်ကူးစံ Ideal ကို ချမှတ် တည်ဆောက်သော ကြိုတင် သတ်မှတ်ထားသည့် စားပွဲဝိုင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ သဘောထား ကွဲလွဲမှုများကို အသိအမှတ်ပြုသော လစ်ဘရယ် ပုံစံ ဖြစ်လာနေခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ အဘိဓမ္မာကဲ့သို့ နက်ရှိုင်း ကျယ်ပြန့်လှသည့် ဦးနှောက် မုန်တိုင်းဆင်ရာ အိုင်ဒီယာများကိုပင် ညနေခင်း လက်ဖက်ရည် ကြမ်းဝိုင်းတွင် ငြင်းကြခုံကြ အချီအချ ဖြစ်တတ်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံသားတို့သည် အိုင်ဒီယော်လော်ဂျီ အားသန်သည်ဟုဆိုက မှားမည် မထင်။ သခင်စိုး၏ ရဲရဲနီသည့် ကွန်မြူနစ်၊ သခင်သန်းထွန်း၏ စစ်မှစစ်သည့် ကွန်မြူနစ်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ဖဆပလ မျှော်မှန်းခဲ့သည့် ဆိုရှယ်လစ်၊ ကိုကိုမောင်ကြီး၏ မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန် ဆိုရှယ်လစ် ဤသို့ ဤနှယ် ပြင်းထန်သော အစွဲများသည်လည်း ယနေ့ခေတ် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် နေလာ နှင်းပျောက် ဖြစ်နေကြပြီ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးပါရာ ဒိုင်းအပြောင်းအလဲတွင် နိုင်ငံရေး အတွေးအမြင်များကို အဓိကထားမှုများ နိဂုံးချုပ်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ အိုင်ဒီယော်လော်ဂျီသမိုင်း နိဂုံးချုပ်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသည် ဤသို့သော ခေတ်သစ် စနစ်သစ်တွင်မှာ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး မတည်ဆောက် နိုင်လျှင် မျက်မှောက်ခေတ်သမိုင်း ရိုင်းရာ ကျပေလိမ့်မည်။
Clash of Ideal
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးသည် ဒီမိုကရေစီ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဟူသော နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားတို့၏ ပန်းတိုင်ကို တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်း လျှောက်လှမ်းသည့် လမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး တာဝန်ယူစ အချိန်တွင် ဒီမိုကရေစီကို အရင်သွားသည့် ဝါရှင်တန် ပုံစံ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အရင်သွားသည့် ဘေဂျင်းပုံစံ၊ ကြိုက်ရာ ပုံစံရွေးဟူသော ဒီဘိတ်သည် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၏ နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေး မေးခွန်း ဖြစ်နေခဲ့ ချိန်လည်း ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးသည် မူလကတည်းက တည်ရှိခဲ့သော Clash of Ideal ကို ဒိုင်ယာလော့ဖြင့် စေ့စပ် ညှိနှိုင်းခဲ့ပြီး မတူတာခွဲလုပ်၊ တူတာတွဲလုပ် ဟူသော ယဉ်ကျေးမှု အသစ်ကို ဖော်ဆောင်ခဲ့ရသည်။ နိုင်ငံရေးပါတီဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေများကို ပြင်ဆင်ပေးပြီးနောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် NLD ပါတီတို့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ပင်မရေစီးဖြစ်သော လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးသို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။ ဤသည်မှာ Adjustment of Interest ကို ညှိယူသော နည်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ရလဒ်မှာ အားလုံး သိသည့်အတိုင်းပင် ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး မျက်နှာစာတွင်တော့ ထိုမျှ မလွယ်ကူလှသလို စိန်ခေါ်မှုများမှာလည်း မနည်းမနော ရှိနေပေသည်။
ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဟူသော ပန်းတိုင်များ တူညီနေကြပြီ ဖြစ်သော်လည်း နည်းလမ်းများတွင် အချင်းများနေမှု များမှာလည်း ဒီမိုကရေစီ၏ ဗီဇသဘောဟု နားလည်ကြရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသွင်ကူးပြောင်းရေးနှင့် ဒီမိုကရက်တိုက်ဇေးရှင်းသည် မည်သည့် ပုံစံနှင့်မျှ မျဉ်းတန်း သဘောယူ၍ မရသောကြောင့် မြန်မာပုံစံ မြန်မာ မော်ဒယ်လ်သည် ဒီမိုကရေစီ သဘောတရားများ အတွက် အသစ်တစ်ရပ်ရပ် ဖြစ်လာပေလိမ့်မည်။ တိုင်းရင်းသားများ၏ ခေတ်အဆက်ဆက် ပျောက်ဆုံးခဲ့သည့် အိပ်မက်များကို ဖော်ဆောင်ရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ကိုယ်တိုင် ပြောကြားထား ပြီးဖြစ်ရာ အိပ်မက်အတွက် စိတ်ကူးစံများ အကျေအလည် ညှိနှိုင်းနိုင်ရေးသာ အရေးကြီးမည် ဖြစ်သည်။ သယံဇာတ ကျိန်စာဟု နိုင်ငံတကာပဋိပက္ခ လေ့လာသူများက တံဆိပ်ကပ်ကြသည့် မငြိမ်းချမ်းသေးသော နယ်မြေ ဒေသများမှာလည်း သဘာဝသယံဇာတ အရင်းအမြစ်များ အုံနှင့်ကျင်းနှင့် ရှိနေကြသည်မှာ အမှန်ပင် ဖြစ်နေသည်။ သယံဇာတ မရှိသောကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပန်းတိုင်သို့ အချိန်တိုတိုအတွင်း လှမ်းလျှောက် နိုင်ခဲ့ကြကုန်သော တောင်ကိုရီးယား၊ စင်ကာပူ၊ ဟောင်ကောင်၊ ဂျပန်တို့မှာ အာရှမော်ဒယ်လ် အသစ်ကိုပင် ဖန်ဆင်းနိုင် ခဲ့ကြသည်။ သယံဇာတ ကြွယ်ဝမှုတို့ကြောင့် ပြည်တွင်းစစ်မီးသို့ သက်ဆင်းကြကုန်သော ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ နိုင်ငံများတွင်လည်း လက်နက်ကိုင် နိုင်ငံရေး၊ စစ်ဘုရင်ဝါဒများအကြား ပိတ်မိကာ ဆင်းရဲတွင်း နစ်ခဲ့ကြရသည့် ခေတ်ပြိုင် သင်ခန်းစာများ မှိုလို ပေါက်အောင် ရှိနေကြသည်။ ဒီမိုကရေစီနှင့် တရားမျှတမှုတို့ ထူထောင်တည် ဆောက်နေကြသော လက်ရှိကာလသည် သင်ခန်းစာများကို သင်ခန်းစာများ ဟူ၍ ပီပီပြင်ပြင် သိမြင နားလည်လာကြရန် အရေးကြီးနေပြီ ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာမကျေ သီချင်းဖြင့် နိဒါန်းဖွင့်ခြင်း
ကိုလိုနီလက်အောက်မှ ရုန်းထ လွတ်မြောက်ပြီးစ မြန်မာနိုင်ငံသည် ခွင့်တူညီမျှ ဝါဒဖြူစင်သည့်မြေ ဖြစ်ရန် ကြွေးကြော်ခဲ့ကြသော်လည်း ဝါဒဖြူ ခြင်း၊ ဝါဒနီခြင်းတို့ဖြင့် Clash of Ideal ထောင်ချောက်သို့ ကျရောက် ခဲ့ရပေသည်။ အားပါလှသည်၊ မာန်ပါလှသည်၊ ဇာတိမာန် ထက်သန်စေသည်ဟု မိမိတို့ အားလုံး ခံယူခဲ့ကြသော နိုင်ငံတော် သီချင်းပါ၊ ကမ္ဘာမကျေဟူသော နိဒါန်းသည်ပင်လျှင် ဥဒါန်းမကျေစေသော ပြည်တွင်းစစ်ကို ဖန်တီးလေခဲ့ရော့သလား စဉ်းစားစရာ ဖြစ်နေသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများကိုပဲ ကြည့်ကြည့်၊ ဒေသတွင်း နိုင်ငံများကိုပဲ မျှော်မျှော် အောက်တန်း နောက်တန်းကျနေသော အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို အမှန်အတိုင်း သိမြင်ကြရန် လိုအပ်သည်။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး ငြိမ်းချမ်းရေး တေးသံများ ဖုံးလွှမ်းနေပြီဟု မြင်ယောင်ကြည့်လျှင် စစ်မီးလျှံတို့ ဝင်းဝင်းတောက်နေသော နယ်စပ်ဒေသများ အစောဆုံး နိုးထလာသည့် စီးပွားရေးဇုန်ကြီးများ ဖြစ်လာပေ လိမ့်မည်။
စိတ်ကူးစံအမျိုးမျိုး ရှိကြကုန်သော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ အနေနှင့်လည်း Reality Analysis နှင့် Future Analysis ကို ကောင်းစွာအသုံးချ၍ သန်း ၆၀ အနိုင်ရရှိရေးကို ရှေးရှုကြရန် မျှော်လင့်မိသည်။ ပွင့်လင်းလာသော ယနေ့ခေတ်တွင် သမိုင်း၏ လိုအပ်ချက်၊ သမိုင်း၏ လမ်းညွှန်မှု စသည်တို့ မရှိသင့်တော့ပါ။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးကို မတည်ဆောက်နိုင်သရွေ့ နေ့လား ညလား မသိ ရေရေရာရာ မရှိနိုင်သော သန်း ၆၀ ၏ အိမ်နိမ့်စံဘဝများ ကျွတ်တမ်း ဝင်ကြဦးမည် မဟုတ်ပါ။ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအတွက် လက်ရှိ ရောက်ရှိနေကြသော ဆုံမှတ်ဖြစ်သည့် အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးသည် သမိုင်းအဆက်ဆက် မကြုံဖူးသော အခွင့်အလမ်းကြီးတစ်ရပ် ဖြစ်သည်ကို သတိပြုကြစေလိုသည်။ ဖက်ဒရယ်ကို ခေါင်းခါခြင်းများ၊ ဒီမိုကရေစီအသံ နားပိတ်ထားခြင်းများ လားလားမျှ မရှိတော့သည့် ယခုရောက်ရှိနေသော နိုင်ငံရေး မြေညီကွင်းသည် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တံခါးခေါက်သံများပင် ဖြစ်နေသည်။
ဂုဏ်သိက္ခာမှ စီးဆင်းလာသော ခွန်အားများ
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးသည် နိုင်ငံရေး ပွတ်တိုက်မှုများသည် ဒီမိုကရေစီ၏ သဘောသဘာဝဟု ခံယူထားပြီး ပွတ်တိုက်မှုများကို ငြိမ်းချမ်းသော ဒိုင်ယာလော့ဖြင့် ဖြေရှင်းသွားသင့်သည်ဟု ယူဆထားသူ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် အသစ်ဖြစ်ထွန်းခဲ့သော မတူတာခွဲလုပ် တူတာတွဲလုပ်သည့် နိုင်ငံရေး ယဉ်ကျေးမှုသည် ၂၀၁၃ နှစ်ကုန်ပိုင်းသို့ ရောက်ရှိချိန်တွင် ခွဲလုပ်နေကြသော မတူသည်များကို ငြိမ်းချမ်းသော ဒိုင်ယာလော့ဖြင့် ဖြေရှင်း အဖြေရှာသော နိုင်ငံရေး ယဉ်ကျေးမှု အသစ်သို့ ဆက်လက် ဆွဲတင်နေကြသည်မှာလည်း အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအတွက် မျှော်လင့်စရာ များစွာ ကောင်းနေပေသည်။
အမျိုးသားညီညွတ်ရေး မရှိသမျှ ကာလပတ်လုံး ဟိုလူ့အောက်ကျို့ရ ဒီလူ့အောက်ကျိုးရ ဖြစ်နေဦးမည်ဟူသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ စကားသည် ယနေ့ အချိန်အထိ မှန်ကန်နေဆဲ ဖြစ်နေသည်မှာလည်း လွတ်လပ်ရေး မရခင်ကတည်းက တည်ရှိခဲ့ကြကုန်သော ကွဲရာဇဝင်နှင့် ချသမိုင်းများကို ယနေ့ခေတ်တိုင် ဆက်လက် သယ်ဆောင်နေကြ သောကြောင့်သာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ကြွေးကြော်သံများ ကြွေးကြော်ခဲ့ကြသော ဂိုဏ်းဂဏ နိုင်ငံရေးနှင့် အကွဲအပြဲ အစဉ်အလာများကို ဆင်ခြင်ဉာဏ်ဖြင့် ပယ်ရှားနိုင်ကာမှ တန်ကာကျပါမည်။
ဆိုဗီယက်အုပ်စုနှင့် အမေရိကန်အုပ်စုတို့ ကမ္ဘာ့မြေပုံများ ကိုင်၍ အားပြိုင်ခဲ့ကြသော စစ်အေးတိုက်ပွဲ ဇာတ်ရှိန် အမြင့်မားဆုံး အချိန်တွင် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသော ပန်းတနော်သား မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးသန့်ကို သီဟိုဠ် (သီရိလင်္ကာ) သံအမတ်ကြီးက ဤသို့ ညွှန်းဆိုခဲ့သည်။ အတ္တတံခွန်ထူခြင်း၊ ရန်လိုခြင်းနှင့် လက်သီး လက်မောင်းတန်းလျက် အာပေါင်အာရင်း သန်ခြင်းတို့ကို ခွန်အားဟု ယူဆကြသော ဤခေတ်ကြီးတွင် ဦးသန့်၌ရှိသော ခွန်အားမှာ တသီးတသန့် ခြားနားနေ၏။ ဦးသန့်၏ ခွန်အားမှာ တည်ငြိမ်သော ဂုဏ်သိက္ခာမှ စီးဆင်းလာသော ခွန်အား ဖြစ်သည်။၊ ကမ္ဘာစစ်ကြီး ဖြစ်ပွားနိုင်သော မီးတောက်များကို မြန်မာနိုင်ငံသား ဦးသန့်သည် တည်ငြိမ်သော ဂုဏ်သိက္ခာမှ စီးဆင်းလာသော ခွန်အားတို့ဖြင့် ဖြေရှင်း အောင်နိုင်ခဲ့သည်။
ဦးသန့်ကို မွေးဖွားခဲ့သော မငြိမ်းချမ်းသေးသည့် မြန်မာ့မြေတွင် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးနှင့် အမျိုးသား တည်ဆောက်ရေးအတွက် လတ်တလော လိုအပ်နေသည်မှာ စစ်ကို ခုံမင်သော၊ စစ်ဘုရင် အလံတော်များ မဟုတ်ရဘဲ တည်ငြိမ်သော ဂုဏ်သိက္ခာမှ စီးဆင်းလာသော ခွန်အားများသာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ လက်ရှိ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ အားလုံးအနေနှင့် သန်း ၆၀ အနိုင်ရရှိရေးအတွက် တည်ငြိမ်သော ဂုဏ်သိက္ခာမှ စီးဆင်းလာသော ခွန်အားများ ပေးသနားရန်သာ မျှော်လင့်မိပေသည်။
Like & Share ပေးခြင်းဖြင့် မိဘများကို ရှာဖွေပေး လိုက်ကြရအောင်ဗျာ.. သနားစရာ ကောင်းပါတယ်.... ဘေးကင်းပြီး အမြန် ပြန်လည် တွေ့ရှိပါစေ...
Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under မှုခင်း | No comments
၃၁.၁၀.၂၀၁၃ရက်နေ့ ၂၃၃၀အချိန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့၊အနောက်ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၊ အထူးမှုခင်းနှိမ်နင်းရေးဌာနစုမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ခိုးမှုများကျူးလွန်ထားကြောင်း သတင်းရရှိထားသူ စန်းလွင်ဦး (ဘ)ဦးကြည်သန်း၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်နေသူအား ဖမ်းဆီးရီမန်ယူစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့စစ်ဆေးရာ စန်းလွင်ဦးသည် ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ (၅)လပိုင်း၊ ရက်မမှတ်မိ
နေ့က ပဲခူးမြို့နယ်၊ ဈေးပိုင်း ညွန့်ရုပ်ရှင်ရုံအနီး ရပ်ထားသော Dream စာတမ်းပါ HONDA -125 အစိမ်း/အပြာရောင် လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်
(၁)စီးအား ခိုးယူရောင်းချထားကြောင်း စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်သဖြင့် ပဲခူးမြို့မရဲစခန်း(ပ)၆၃၃/၂၀၁၃၊ ပုဒ်မ ၃၇၉/၅၄ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ (၅)လပိုင်း၊ ရက်မမှတ်မိနေ့ကပင် ပဲခူးမြို့နယ်၊
ဈေးကြီးအနီးရပ်ထားသော Dream စာတမ်းပါ SUNYOKE -110 အနက်ရောင်လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ် (၁)စီးအား ခိုးယူရောင်းချထားကြောင်း စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်သဖြင့် ပဲခူးမြို့မရဲစခန်း(ပ)၆၃၄/၂၀၁၃၊
ပုဒ်မ ၃၇၉/၅၄ဖြင့်လည်းကောင်း အသီးသီးအမှုဖွင့်
credit>> Yangon police
ထိုင်းဘုရင့်မြေးတော်မလေး အခု ဆီးဂိမ်းမှာ မြင်းစီးဝင်ပြိုင်မယ်
Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under အားကစားသတင်း | No comments
သူကတော့ (၂၇) ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်းစ် ပြိုင်ပွဲရဲ့ မြင်းစီး အားကစား နည်းမှာ ၀င်ပြိုင်မယ့် ထိုင်းဘုရင် Bhumibol Adulyadej ရဲ့ မြေးမတော် Princess Sirivannavari ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် အင်ဒိုနီးရှား ဆီးဂိမ်းစ် ပြိုင်ပွဲရဲ့ မြင်းစီး အားကစားနည်း ပြိုင်ပွဲကို သွားရောက် ကြည့်ရှု ခဲ့ပြီး ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံမှ လက်ခံ ကျင်းပမည့် ဆီးဂိမ်းစ် ပြိုင်ပွဲမှာ ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင် မယ်လို့ ဆိုလာ ပါတယ်။
Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under ကျန်းမာရေး |5comments
ကာမဂုဏ် လိုက်စားတာ မဟုတ်ဘဲ သင်ရဲ့ ဇနီးမယားနဲ့ ပုံမှန် လိင်ဆက်ဆံမှု လုပ်တာကြောင့် စိုးရိမ် ကြောင့်ကြမှု များတာနဲ့ မိမိကိုယ်ကို လုံခြုံမှုမရှိတာလိုမျိုး အချက်တွေ မရှိတော့ဘဲ ငယ်ရွယ် နုပျိုအောင် နေနိုင်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်သည် အသက်ရှည်ရတဲ့ သော့ချက်တွေ အနေနဲ့ ဓာတုပစ္စည်း Response တွေရအောင် လှုံ့ဆော်မှု အနေနဲ့ လင်မယားချင်း ပွေ့ဖက်တာနဲ့ ထိတွေ့ကိုင်တွယ်မှု လုပ်တာတွေကို ၁၅ မိနစ်ခန့် လိင်ဆက်ဆံမှု မပြုလုပ်ခင်နဲ့ ပြုလုပ် အပြီးမှာ ပြုလုပ်ပေးပါ။၂။ အအေးမိရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်
ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ဒီလို သဘာဝအလျောက်ထွက်လာတဲ့ Antibodies တွေ ပိုရရှိအောင် Sex ကို အချိန် ကြာကြာ လုပ်ပေးရပါမယ်။ ဒါကြောင့် လိင်ဆက်ဆံမှုကို Position မျိုးစုံလုပ်ပေးပါ။
ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်တစ်နေ့တည်းကို ခဏခဏ သုက်လွှတ်မည့်အစား နေ့စဉ်တစ်ကြိမ်စီ သုက်လွှတ် ပေးတာဟာ အကျိုးရှိဆုံးပါ။
လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် စိတ်ကျေနပ်မှု ရနေတာဟာ နာကျင်မှုကို သက်သာစေတယ်လို့ Biology and Medicine ဂျာနယ်မှ သုတေသနပြုချက်အရ သိရပါတယ်။ လိင်ဆက်ဆံမှု ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ သဘာဝ အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေး Endorphins တွေဟာ တစ်မိနစ် အတွက် သုံးဆလောက် မြင့်တက် လာပါတယ်လို့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Paisley တက္ကသိုလ်မှ Sexual Psychologisl ကပြောပါတယ်။ လိင်ဆက်ဆံမှုကြောင့် ခါးနောက်ကျော နာတာနဲ့ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက် ဝေဒနာတွေ သက်သာသွားတဲ့ အထောက် အထားတွေ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်
သတင်းမီဒီယာ ဥပဒေကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြင်ဆင်ထားသည့် အပိုဒ်၊ အပိုဒ်ခွဲ အတိုင်း အတည်ပြု
Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under ပြည်သူ့လွှတ်တော် | No comments
်ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန် အစည်းအဝေး (၁၈) ရက်မြောက်နေ့ကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ကျင်းပရာ ရသေ့တောင် မဲဆန္ဒနယ်မှ ဒေါ်ခင်စောဝေ၏ ရခိုင်ပြည်နယ်၏ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားကို ရှေးရှုပြီး ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော ဒေသ တွင် ဘက်စုံထောင့်စုံမှ ထိရောက်သော ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ထားသည့် လုံခြုံရေး၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး၊အုပ်ချုပ်ရေး အစီအမံများကို ယခင်ကထက် သာလွန်ကောင်းမွန်သည့် အစီအမံများဖြင့် အမြန်ဆုံးချမှတ် စတင် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအား တိုက်တွန်းကြောင်း အဆိုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် မောင်မောင်အုန်းက ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသည့် အခက်အခဲများကို ကျော်လွှား၍ မဟာဗျူဟာ၊ နည်းဗျူဟာများ၊ ရေတို၊ ရေရှည်တွင် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအမံများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ရေးဆွဲ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင် ရွက်လျက်ရှိ သည့်အပြင် ယခုအဆို တွင်ပါရှိသည့် တင်ပြချက်များကိုလည်း အလေးထား သုံးသပ် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည့်အတွက် အဆိုကို မှတ်တမ်းတင် ထားနိုင်ရေး စဉ်းစား သုံးသပ်နိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါကြောင်းဖြင့် ပြန်လည် ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီး လွှတ်တော်က အဆိုကို မှတ်တမ်း တင်ထားရှိရန် ဆုံးဖြတ် ခဲ့ကြောင်းသတင်း ရရှိသည်။
ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဂုဏ်ထူးဆောင် ခရီးသွား သံတမန်ဘွဲ့ ခန့်အပ်ခံရတဲ့ မော်ဒယ် တင်မိုးလွင်
Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under အနုပညာ | No comments
အနုပညာလောက မှာ မော်ဒယ် မိခင်ကြီးလို့ တင်စားခေါ်ဝေါ် ခံရတဲ့ Talents & Models အေဂျင်စီ တည်ထောင်သူ တင်မိုးလွင် က အောက်တို ဘာ ၇ ရက်နေ့က ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ ဆိုးလ်မြို့ကို သွားရောက်ပြီး ကိုရီးယား နိုင်ငံ ရဲ့ခရီးသွား ဝန်ကြီး ဌာန ကပေးအပ် တဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင် ခရီး သွား သံတမန် ဘွဲ့ကို သွားရောက် ယူခဲ့ပါ တယ်။ ကိုရီးယား ကုန်သွယ်မှု အဖွဲ့အစည်း၊ မြန်မာ နိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှု အဖွဲ့အစည်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာရောက် လုပ်ကိုင် နေတဲ့ ကိုရီးယား လုပ်ငန်းရှင် များရဲ့ ထောက် ခံပေးအပ်မှုကြောင့် ရရှိခဲ့ ခြင်းဖြစ်တယ် လို့ သိရပါတယ်။ ဂုဏ်ထူး ဆောင် ခရီးသွား သံတမန်ဘွဲ့ကို ခန့်အပ် ခြင်း ခံရတဲ့ မော်ဒယ် တင်မိုးလွင်က
“ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ခရီးသွား ဝန်ကြီးဌာန ကနေပြီးတော့ ခန့်အပ် တဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင် ခရီးသွား သံတမန် ဘွဲ့ကို သွားပြီးတော့ ယူရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ဒီဘွဲ့ကို ယူခွင့် ရတဲ့ အတွက်လည်း တအား ဂုဏ်ယူမိပါ တယ်။ သူတို့အနေ နဲ့ကလည်း မမို့ကို ဘယ်လို ရှာတွေ့သွားခဲ့လဲ ဆိုတော့ ကိုရီးယား သံရုံး၊ မြန်မာပြည် မှာရှိတဲ့ သံ ရုံးတော်တော်များများ နဲ့ ပွဲတွေကို လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ပေးလေ့ ရှိတယ်။ ဒီလိုပဲ မမိုးက အမြဲတမ်း ကူညီပေး လေ့ရှိတယ်။ ကိုရီးယား သံရုံးမှာလည်း မမိုး ရဲ့ နာမည် List ရှိတယ်။ အဲဒီ တော့ မြန်မာပြည် ကိုရောက်နေတဲ့ ကိုရီးယား ကုန်သွယ်မှု အဖွဲ့အစည်း ကလည်း မြန်မာပြည်ကို စရောက်ကတည်းက မမိုး တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ ဆက်သွယ် တယ်။ အဲဒီ သံရုံးရယ်၊ အဖွဲ့ အစည်းတွေရယ် ၊အခုမြန်မာပြည်မှာ ရှိနေတဲ့ ကိုရီးယား လုပ်ငန်းရှင်တွေ ရဲ့ ထောက်ခံမှုတွေ နဲ့ပေါ့လေ။ မမိုးရဲ့ Profile ကိုလိုချင်ပါတယ်။ မမိုးရဲ့ Data တွေကို သိချင်ပါတယ် ဆိုလို့ သူတို့နဲ့ မိတ်ဆက်တဲ့ အခါမှာ ဒီဘွဲ့ကို ခန့်အပ်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က မြန်မာပြည်ကနေ သံတမန် တစ်ဦး လိုချင်တယ် လို့ သူတို့ရဲ့သံရုံး ကိုပြောလိုက်တဲ့ အခါမှာ သံရုံးနဲ့ အဆက်အသွယ် ရှိတော့ သံရုံးကနေ ရွေးချယ် ပေးလိုက်တာပေါ့။ သံရုံးရယ် ၊မြန်မာနိုင်ငံက ကုန်သွယ်မှု အဖွဲ့ အစည်း ရယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံက ကိုရီးယား လုပ်ငန်းရှင်တွေ ကထောက်ခံပေး လိုက်တာပါ” လို့ ပြောပြခဲ့ ပါတယ်။ ကိုရီးယားနိုင်ငံ ကို သွားရောက် ဖြစ်ခဲ့တုန်း က အတွေ့ အကြုံများ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လည်း တင်မိုးလွင်က “ဟိုမှာတော့ သံတမန် တစ်ယောက် အနေနဲ့ သူတုိ့ရဲ့ ဒေသမြှင့်တင်ရေး လုပ်ငန်းတွေ ဖြစ်တဲ့ အလှအပ၊ ကျန်းမာရေး ၊ဖက်ရှင်၊ စားသောက်ကုန် ၊ယဉ်ကျေးမှု အဲဒီဟာတွေကို တစ်နေရာစီ လိုက်လေ့လာ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ အမှန်တော့ မမိုးက ဘယ်လိုမှ အချိန်မရပါဘူး။ အခုမြန်မာပြည် မှာရှိတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ် တွေ၊ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ ပရဟိတတွေ ကပေါင်းစုံကနေ ဝင်ရောက် လုပ်ဖြစ် နေတဲ့ အတွက် ဒီလိုမျိုး အလုပ်လုပ်ဖို့ ဆိုတာ အချိန်က မရှိသလောက် ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ လည်း သူတို့အနေ နဲ့လည်း တကယ် လိုအပ်တယ်။ မြန်မာပြည် အနေနဲ့လည်း တကယ် လိုအပ်တဲ့ အတွက် အချိန်ပေးပြီး နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အဆင်ပြေသွားအောင် သံ တမန် အနေနဲ့ လုပ်ပေးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မမိုးဝါသနာ ပါတဲ့ အတွက်အခုလို လုပ်ခွင့်ရတဲ့ အတွက် ဂုဏ် လည်းယူပါတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
မြန်မာ့သတ္တုတွင်း ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်း လွှတ်တော်က သဘောတူကြောင်း ဆုံးဖြတ်
ပြည်ထောင်စု အဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ချီးမြှင့်ငွေ၊ စရိတ်နှင့် အဆောင်အယောင်များ ဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်း၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် အဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ချီးမြှင့်ငွေ၊ စရိတ်နှင့် အဆောင်အယောင်များဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းနှင့် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ် ခွင့်ရ ဒေသ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်များ၏ ချီးမြှင့်ငွေ၊ စရိတ်နှင့် အဆောင်အယောင်များ ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ကို ပြင်ဆင် သည့် ဥပဒေကြမ်း တို့အား လွှတ်တော်၌ ဆွေးနွေး စဉ်းစားရန် အဆိုကို ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဒေါက်တာ လင်းအောင်က ယနေ့ ကျင်းပသည့် အမျိုးသား လွှတ်တော် အဋ္ဌမ ပုံမှန် အစည်းအဝေးတွင် တင်သွင်း ရာ လွှတ်တော်က သဘောတူကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ြ်ပည်ထောင်စုအဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ချီးမြှင့်ငွေ၊ စရိတ်နှင့် အဆောင်အယောင်များဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်း နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီဝင် ဦးစောမော်ထွန်းက အဓိက ပြင်ဆင်သည့် အကြောင်းအရာမှာ ဝင်ငွေခွန် ဥပဒေအရ အခွန်ကောက်ခံနိုင်ရန် အတွက် ချီးမြှင့်ငွေ၊ စရိတ်နှင့် အဆောင်အယောင်များ ဆိုင်ရာ ဥပဒေ အသီးသီးတွင် ''ဝင်ငွေခွန် ကောက်ခံခြင်းမှ ကင်းလွတ်စေရမည်'' ဆိုသည့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ပယ်ဖျက်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ လက်ရှိအချိန်တွင် ပြည်ထောင်စု အဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ကိုယ် ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်များ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ နှင့်ကောင်စီဝင်များ၏ လစဉ်ချီးမြှင့် ငွေများကို နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက် အရလျှော့ချ၍ ခံစားလျက်ရှိကြပါကြောင်း၊
သို့ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ၌ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ချီးမြှင့်ငွေများကို ယခုတိုင် လျှော့ချပြင်ဆင်ခြင်း မပြုလုပ်ရသေးသည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက် အတိုင်း မခံစားဘဲ ယခုတိုင် လျှော့ချ၍ ဆက်လက် ခံစား မည် ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ၌ လျှော့ချပြင်ဆင် ပြဋ္ဌာန်းပေးရန် လက်တွေ့ကျကျ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊
ဥပဒေပြဋ္ဌာန်း ချက်အတိုင်း မခံစားခြင်းသည် ယာယီသဘော မဟုတ်ဘဲ သက်တမ်းအားဖြင့် ထက်ဝက်ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်ရာ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများအား ပြင်ဆင်ရန် အချိန်သင့်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စု အဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ စရိတ်နှင့် အဆောင် အယောင် သတ်မှတ်ချက်များသည်လည်း ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး နှင့်တရား စီရင်ရေး နယ်ပယ်(၃)ရပ် စလုံး အတွက် ဖြစ်နိုင်သမျှ ညီညွတ်မှု ရှိအောင် ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်း သင့်သည်ကို လေ့လာ တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ပါ၍ ယင်း ဥပဒေကြမ်း အပေါ် အမျိုးသား လွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီ၏ ပြင်ဆင်ချက်များ အတိုင်း အတည်ပြုဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တင်ပြအပ်ပါကြောင်းဖြင့် ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို တင်သွင်း ခဲ့သည်။
မင်္ဂလာအခမ်းအနားသည် လူ့ဘဝတွင် အတော်အတန်ကုန်ကျစရိတ်များသော ကိစ္စတစ်ရပ်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုအတွက်ပျမ်းမျှ ကုန်ကျငွေမှာ ဒေါ်လာ သုံးသောင်းရှိသည်ဟုသိရသည်။ဂုဏ်သိက္ခာရာထူးကြီးသူများ၊ငွေကြေးချမ်းသာသူများ၊ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူများ ဘုရင့်ဆွေတော်မျိုးတော်များ စသူတို့သည် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ ကုန်ကျသော မင်္ဂလာအခမ်းအနားကြီးများကို ပြုလုပ်ကျင်းပလေ့ရှိကြသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကုန်ကျစရိတ်အများဆုံး မင်္ဂလာ အခမ်းအနားငါးခုကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
(၁) Prince Charles နှင့် Lady Diana
ပျမ်းမျှကုန်ကျငွေ- ဒေါ်လာ သန်း ၁ဝဝ
ဝေလမင်းသားချားလ်နှင့် မင်းသမီးချောဒိုင်ယာနာတို့၏ ၁၉၈၁ခုနှစ်ကျင်းပခဲ့သော မင်္ဂလာအခမ်းအနားသည် ကမ္ဘာ ပေါ် တွင် ကုန်ကျစရိတ်အများဆုံး ဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်တွင်သူ့၏ သားကြီးဝီလျံပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့သော စိန့်ပေါလ် ဘုရားကျောင်း (St.Paul’s Cathedral) တွင် ပြုလုပ်ကျင်းပ ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါးပေရှိေ သာ မင်္ဂလာကိတ် ပေ၂ဝ ရှည်သော သတို့သမီးဝတ်စုံတို့ သည်လည်း စိတ် ဝင်စားဖွယ်ရာ ဖြစ်ခဲ့သည်။
(၂) Vanisha Mittal နှင့် Amit Bhatia
ပျမ်းမျှကုန်ကျငွေ- ဒေါ်လာသန်း ၆ဝ
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးလောကတွင်အသက်ငယ်ပြီးအောင်မြင်သောစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်အာမစ်ဘာတီးယာနှင့်ကမ္ဘာ့သံမဏိသူဌေးကြီး N-Mittal ၏ တစ်ဦးတည်းသောသမီး Vanisha Mittal တို့၏ မင်္ဂလာပွဲသည် ကြားရ သူများကို အံ့သြရစေသည်။ ၂ဝဝ၄ခုနှစ်တွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံ၌ ပြုလုပ် ကျင်းပခဲ့ပြီး မင်္ဂလာအခမ်းအနား ဖိတ်ကြားလွှာ ကို လေယာဉ်လက်မှတ်၊ ဟိုတယ်အခန်းအမှတ်တို့နှင့် အတူငွေသေတ္တာထဲထည့်ပြီးပေးပို့ ဖိတ် ကြား ခဲ့သည်။ပြင်သစ်နိုင်ငံဗာ ဆိုင်းနန်းတော်ကြီး တွင် ပြုလုပ် ကျင်းပခဲ့ေ သာ မင်္ဂလာအခမ်းအနားတွင်ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးကြီး ရှန်ပိန်များနှင့် ဧည့်ခံခဲ့သည်။
(၃) Prince William နှင့် Kate Middleton
ပျမ်းမျှကုန်ကျငွေ- ဒေါ်လာသန်း ၃ဝ
မင်းသမီးချောဒိုင်ယာနာ၏ သားကြီး၊ မင်းသားဝီလျံနှင့်ကိတ် မက်ဒဲလ်တန်၏ ၂ဝ၁၁ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့သော တော်ဝင် မင်္ဂလာဆောင်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူအများ အာရုံစိုက်ခြင်းခံခဲ့ရ သည်။ သတို့သမီး၏လည်ဆွဲတန်ဆာ မဝတ်ဆင်ခဲ့ခြင်းကပင် ပြော စမှတ် ဖြစ်ခဲ့သည်။ မင်္ဂလာပွဲတွင် အသုံးပြုခဲ့သော ပန်းတန် ဖိုးငွေမှာ ဒေါ် လာရှစ် သိန်းခန့်ရှိသည်ဟုသတင်းများကဆိုသည်။ မင်္ဂလာ အခမ်း အနားကို စိန့်ပေါလ်ဘုရားကျောင်းတော်ကြီးတွင် စီရင်ကျင်းပခဲ့ပြီး ပရိသတ်ေ ပါင်း နှစ်ဘီ လီယံ ခန့် စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသည်။
(၄) Wayne Rooney နှင့် Coleen Mcloughlin
ပျမ်းမျှကုန်ကျငွေ -ဒေါ်လာ ခုနစ်သန်း
၂ဝဝ၈ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလန် ဘောလုံးသမား ရွန်းနီနှင့် သူ၏ငယ်ချစ် Coleen Meloughlin တို့ မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့ကြသည်။ဖိတ်ကြားခံရသော ဧည့်သည်တော် ၆၅ယောက် ပါဝင်သော စင်းလုံးငှားလေယာဉ် သည် အီတလီနိုင်ငံဂျီနိုအာမြို့သို့ ရောက်ရှိလာပြီးနောက် ဒေါ်လာသန်း ၁၂ဝကျော်တန်သော ရွက်လှေစီးခဲ့ကြသည်။ ယင်းနောက် ဧည့် သည် တော်များကို ကြယ်ငါးပွင့် ဟိုတယ် တွင်ဧည့်ခံခဲ့ကြသည်။နောက်ဆုံးကမ္ဘာပေါ်တွင် အလှဆုံး နှင့် တန်ဖိုး ကြီးကြီးပေးရသော ၁၇ရာစုဖီလာနှင့် အီတလီ တံငါရွာ ကလေးဖြစ်သော ပေါ်တိုဖီဒို (Protofino) အထက်ပိုင်းအလယ်ခေတ်ဆန်း ခန်းမကြီးတစ်ခုတွင်မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲကို ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့သည်။
(၅) Liza Minnelli နှင့် David Gest
ပျမ်းမျှကုန်ကျငွေ- ဒေါ်လာ ၄ ဒသမ ၁ သန်း
၂ဝဝ၂ခုနှစ်၊ မတ်လတွင်ပြုလုပ် ကျင်းပခဲ့သောကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင် မင်းသမီး Liza Minneli နှင့် ထုတ်လုပ် ရေးပိုင်ရှင် David Gest တို့၏ မင်္ဂလာ ပွဲကို ဂရမ်မီဆု ပေးပွဲ နှင့် ခိုင်းနှိုင်းကြသည်။ နယူးယောက် မြို့ရှိနာမည်ကျော် Regent ဟိုတယ် တွင် ဧည့်ပရိသတ်ပေါင်း ၈၅ဝကျော်နှင့် ပြုလုပ် ကျင်းပခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ထင်ရှားကျော်ကြား သူများ စွာတက်ရောက်ခဲ့သော ယင်းပွဲသို့ အဆိုတော် မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်၊အဲလစ် ဇဘတ်တေလာ၊ဒိုင်ယာနက်ရို့စ်စသူ တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်နေ့အတွက် ရည်ညွှန်းနိုင်ငံခြား ငွေလဲလှယ်နှုန်း
ယနေ့ နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်နေ့ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်က သတ်မှတ်သော ရည်ညွှန်းနိုင်ငံခြား ငွေလဲလှယ်နှုန်း Reference Foreign Exchange Rate မှာ အမေရိကန် တစ်ဒေါ်လာကို မြန်မာငွေ ၉၇၂ ကျပ် သတ်မှတ်ကြောင်း သိရသည်။
တစ်ယူရို - ၁၃၁၄.၁ ကျပ်၊
စင်္ကာပူ တစ်ဒေါ်လာ - ၇၈၂.၆၇ ကျပ်၊
စတာလင်ပေါင် တစ်ပေါင် - ၁၅၅၃.၀ ကျပ်၊
ဂျပန်ယန်း တစ်ရာ - ၉၈၆.၄၅ ကျပ်၊
သြစတြေးလျဒေါ်လာ တစ်ဒေါ်လာ - ၉၂၄.၉၂ ကျပ်၊
တရုတ်ယွမ် တစ်ယွမ် - ၁၅၉.၃၇ ကျပ်၊
အိန္ဒိယရူပီး တစ်ရူပီး - ၁၅.၇၄၁ ကျပ်၊
ကိုရီးယားဝမ် တစ်ရာ - ၉၁.၅၀၀ ကျပ်၊
မလေးရှား ရင်းဂစ် တစ်ရင်းဂစ် - ၃၀၆.၃၃ ကျပ်
ထိုင်းဘတ် တစ်ဘတ် - ၃၁.၀၅၄ကျပ် သတ်မှတ်သည်။
တစ်ဖက်နိုင်ငံတွင်း ဒုက္ခသည် အမည်ခံနေရာမှ အင်အား သိန်းဂဏန်းရှိ အလုပ် လက်မဲ့များကို ရခိုင်ပြည်နယ်အား တိုက်ခိုက်ရန် အစွန်းရောက် အဖွဲ့များက အလုံးအရင်းဖြင့် ကူညီထောက်ပံ့သိမ်းသွင်းနေသည်ဟုဆို
ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ဖက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အတွင်း အင်အားသိန်းဂဏန်းရှိ ဒုက္ခသည် အမည်ခံနေရာများတွင် အလုပ်လက်မဲ့လူလတ် ပိုင်းအရွယ်များကို မိမိတို့ပြည်နယ်အားတိုက်ခိုက် ရန် အင်အားစုတစ်ရပ်အဖြစ် အစွန်းရောက်အဖွဲ့ များက အလုံးအရင်းဖြင့် ကူညီထောက်ပံ့မှုပြု သိမ်းသွင်းပြီး သင်တန်းများဖွင့်လှစ်လေ့ကျင့်ပေး
နေသည်ကိုသိရှိရကြောင်းရသေ့တောင်မဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ခင်စောဝေက ယနေ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် အဆို တင်သွားရာ၌ပြောကြားသည်။
ဒေါ်ခင်စောဝေက''တစ်ဖက်နိုင်ငံ၏ ရွေး ကောက်ပွဲအကြိုကာလတွင် ပါတီကြီးနှစ်ခု အားပြိုင်မှု၊ အထွေထွေသပိတ်မှောက်မှု၊ ဆူပူ အကြမ်းဖက်ဆန္ဒပြမှုများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားပြီး အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရား
လျော့ရဲနေချိန်နှင့်တိုက်ဆိုင် နေသဖြင့် နယ်စပ်ဒေသတွင်ရှိသော လက်နက် ကိုင်အင်အားစုများအတွက် ထိန်းချုပ်မည့်သူ မရှိဘဲ စိတ်ကြိုက်ကြံစည်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ ယခုလိုအချိန်မျိုး တွင် ၄င်းတို့နှင့်ထိစပ်နေသော ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသ တွင်လဲ(န.စ.က)ဖျက်သိမ်းပြီး အင်အားလစ်ဟာမှု ဖြစ်ပေါ်နေသောအချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေ ရပါကြောင်း၊ (န.စ.က) နေရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက် သည်ဆိုသော်လဲ လူအင်အား အနေဖြင့် ယခင် (န.စ.က)ထက် ထောင်ဂဏန်းလျော့နည်းခြင်း၊ နယ်မြေ မကျွမ်းကျင်မှု၊ နယ်စပ်ဒေသတွင် လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်မှုနှင့်စစ်နည်းဗျူဟာအတွေ့ အကြုံမရှိသေးသူများဖြစ်နေခြင်း၊ အင်အား နည်းပါးမှုကြောင့် မြစ်ပေါက်၊ ချောင်းပေါက်နှင့် ကင်း စခန်းများတွင် လုံခြုံရေးအပြည့်အဝ ချမထားနိုင်ခြင်း၊ မြို့ပေါ်မှအပ လ.ဝ.က လုပ်ငန်းများ ရပ်တန့်နေခြင်းတို့ကို တွေ့မြင်ကြား သိနေရပါတယ်''ဟု အဆိုတင်သွင်း ရာတွင် တင်ပြပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဌာနဒုတိယဝန်ကြီးကပြန်လည်ရှင်းလင်းရာ ရခိုင် ပြည်နယ် မောင်တောခရိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနောက်ဘက် အစွန်ဆုံးတွင်တည်ရှိပြီး လူဦးရေ ၈၁၁ဝဝ၉ ဦးနေထိုင်ကာ ယင်းအနက် ဘင်္ဂါလီ/ နိုင်ငံခြားသားဦးရေမှာ ၇၃၈၃၉၃ ဦးရှိ၍ တိုင်း ရင်းသားဦးရေမှာ ၇၂၆၁၆ ဦးရှိသည်ဟုဆိုသည်။ နေထိုင်သူအားလုံးအနက် ဘင်္ဂါလီ/နိုင်ငံခြားသား ဦးရေက တိုင်းရင်းသားဦးရေထက် လူဦးရေ ၆၆၅၇၇၇ ဦး (ခြောက်သိန်းခြောက်သောင်း ကျော်) ပိုမိုနေသည်ကို တွက်ချက်သိရှိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ရဲနှင့်ပြည်သူအချိုးမှာ တစ် အချိုး ၉ဝဝ ဖြစ်သော် လည်း ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်မူ တစ် အချိုး ၅ဝဝ ဖြင့် လုံခြုံရေးတာဝန်ယူပေးထားကြောင်း၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဌာန အနေဖြင့် သတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များကို လျင်လျင်မြန်မြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်း အလုံး ၁ဝဝဝကို ရခိုင်ပြည်နယ် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ဖြန့်ဝေထားရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အတွက် ရဲတပ်ရင်းအင်အားတိုးချဲ့ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည့်အပြင် ပင်လယ်ပြင်လုံခြုံရေးတာဝန် များကို ရေကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း၊ ထို့အပြင် တရားမဝင်ဝင်ရောက်မှု များကို ထိန်းသိမ်းကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ်ခြံစည်းရိုး ကာရံ ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် နတ်မြစ်ဝမှ မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ်တစ် လျှောက် ၁၆၈ဒသမ၅၆၈ မိုင်အထိ အပိုင်းလေး ပိုင်းခွဲကာဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း ဒုတိယ ဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်အုန်းကရှင်းပြသည်။
လူ့အဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုကြား ခွဲခြား ဆက်ဆံသည်ဟုဆိုကာ ဆန္ဒပြ ကန့်ကွက် ခံနေရသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ NGO နှင့် INGO များ လူ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခု အတူတကွ နေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် လူသားချင်း စာနာသည့် အကူအညီများ ပေးရာတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိရန်နှင့် မျှတမှုရှိရန် ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်က ပြောဆိုကြောင်း ပြည်နယ် ဥပဒေချုပ် ဦးဦးလှသိန်းက ပြောကြားသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းများ အပါအဝင် INGO၊ INGO များနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်တို့ နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၌ တွေ့ဆုံစဉ် ယင်းသို့ ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပဋိပက္ခများ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားနေသည့် ဒေသဖြစ်သဖြင့် အကူအညီများ ပေးရာတွင် ပွင့်လင်းမှု ရှိရန်နှင့် မျှတမှုရှိရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ NGO နှင့် INGO များအနေနှင့် ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများနှင့် ထိတွေ့ကာ လုပ်ဆောင်ချက်များ မျှတမှု ရှိကြောင်း ထင်သာမြင်သာ လုပ်ဆောင်ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ်က ပြောဆိုသည်ဟု ဦးဦးလှသိန်းက ဆိုသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲသို့ NGO နှင့် INGO အဖွဲ့ ၁၈ ခုမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး NGO နှင INGO များအနေနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း နေထိုင်ရာတွင်လည်း ဥပဒေ မူဘောင်များနှင့်အညီ နေထိုင်ရန် ဝန်ကြီးချုပ်က ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ၎င်းကထပ်မံ ပြောဆိုသည်။
ယင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂ သတင်းပြန်ကြားရေးဌာန (UNIC) မှ ပြန်ကြားရေးအရာရှိ ဦးအေးဝင်းကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းရာတွင် NGO နှင့် INGO များသည် လွတ်လပ်မှု၊ လူသားချင်းစာနာမှု၊ ဘက်မလိုက်မှုစသည့် အခြေခံ အချက်များကို မလွဲမသွေ လိုက်နာရကြောင်း မှတ်ချက်ပြု ပြောကြားသည်။
သို့သော်လည်း ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ NGO နှင့် INGO များကို ဝန်ကြီးချုပ်က ပြောဆိုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သီးခြားမှတ်ချက်ပေး ပြောဆိုခြင်း မပြုပေ။
NGO နှင့် INGO များသည့် ရခိုင်နှင့် ဘင်္ဂါလီ လူ့အဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုကြားခွဲခြား ဆက်ဆံသည်ဟုဆိုကာ အောက်တိုဘာလ ၃ ရက်နေ့က စစ်တွေမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံဝင်း အတွင်းတွင် မြို့ခံလူထု ၃၀၀ ကျော်က ဆန္ဒပြ ကန့်ကွက်ခဲ့မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့က ပေါက်တောမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်မှုတွင် ဒဏ်ရာရရှိသည့် ဘင်္ဂါလီများကို INGO တစ်ခုက အမြန်ရေယာဉ်ဖြင့် ခေါ်ဆောင်ကာ စစ်တွေဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင် ခဲ့သော်လည်း လက်မောင်းတွင် ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာ ရရှိခဲ့သည့် ရခိုင် အမျိုးသမီးကို ခေါ်ဆောင်ခြင်း မရှိသဖြင့် ဒေသခံများ မကျေနပ်ကြကြောင်း ပေါက်တော ဒေသခံများက ပြောကြားသည်။
ပေါက်တောမြို့နယ်ရှိ ဒေသခံ မဟုတ်သည့် NGO နှင့် INGO များ နှစ်ရက်အတွင်း ထွက်ခွာပေးရန် အချက်ပါဝင်သည့် ကြေညာချက် တစ်စောင်ကို မြို့လူထုက နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် INGO နှင့် NGO အဖွဲ့ပေါင်း ၅၀၀ ကျော် ရှိသည့်အနက် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ၁၉ ဖွဲ့ ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်လျက် ရှိသည်ဟု ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသော်လည်း ဒေသခံလူထုကမူ INGO နှင့် NGO အဖွဲ့ပေါင်း ၈၀ ခန့် ရှိသည်ဟု ပြောဆိုထားသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် မောင်တောမြို့နယ်၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခများတွင် ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ ၆၉ ဦးကို ယခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်နေ့က ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရာတွင် INGO ဝန်ထမ်းနှစ်ဦး ပါဝင်သည်။
Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under နည်းပညာ | No comments
တောင်ကိုရီးယားအခြေစိုက် LG အီလက်ထရောနစ် ကုမ္ပဏီက IT Gadgets တွေမှာလည်း ခြေလှမ်းကျဲနေတာကို ပရိသတ်တွေ သတိထားမိမှာပါ။ ရက်ပိုင်းကမှ ထွက်ရှိထားတဲ့ Nexus5စမတ်ဖုန်းဟာလည်း LG နဲ့ Google ပူးပေါင်းထုတ်လုပ် လိုက်တဲ့ Android 4.4 (KitKat) ကိုပထမဆုံး အသုံးပြုထားကာ LG G2 ဖုန်းနဲ့ Hardware ပိုင်းမှာ ဆင်တူနေတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီလိုခြေလှမ်းကျဲနေတဲ့ LG ရဲ့ ရှားရှားပါးပါး Tablet တစ်လုံးဖြစ်တဲ့ G Pad နဲ့မိတ်ဆက် ပေးလိုက်ပါတယ်။
နာမည်အပြည့်အစုံကတော့ LG G Pad 8.3 ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ မျက်နှာပြင်အကျယ် ၈.၃လက်မ WUXGA Capactivite Touchscreen ဖြစ်ပါတယ်။ Screen ကိုဖွင့်ဖို့ Power ခလုတ်ကို နှိပ်နေစရာမလိုတော့ဘဲ Screen ကို နှစ်ချက်ထိလိုက်ရုံဖြင့် ပွင့်လာစေမယ့် KnockOn ဆိုတဲ့ Feature လည်းထည့်သွင်း ထားပါတယ်။
1920×1200 Resolution ရှိပြီး စာဖတ်ခြင်းနဲ့ Web Browsing လုပ်ခြင်းတွေမှာ အဆင်ပြေစေမှာပါ။
တပ်ဆင်ထားတဲ့ Chipset က Qualcomm ရဲ့ Snapdragon 600 ဖြစ်ပြီး CPU ကတော့ Quad-core 1.7 GHz Krait 300 ပါ။ RAM 2GB စီစဉ်ပေးထားကာ ဂရပ်ဖစ်ကိုလည်း Adreno 320 တပ်ဆင်ထားတာကြောင့် ဂရပ်ဖစ်မြင့်မားတဲ့ Tablet တစ်လုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကင်မရာက 5MP အရည်အသွေးနဲ့ တပ်ဆင်ထားတာဖြစ်ပြီး Autofocus, LED Flash, Geo-Tagging, Image Stabilization, Time catch shot & VR panoramas စတဲ့ Features တွေလည်း အစုံအလင်ပါဝင် နေပါတယ်။ ဗီဒီယိုတွေကိုလည်း 1080p@30fps အရည်အသွေးနဲ့ ရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ရှေ့ကင်မရာ 1.3 MP ဖြစ်ပါတယ်။
Tablet အတွင်းမှာ အချက်အလက်သိုလှောင်ဖို့ 16GB built-in storage ပါဝင်ပြီး မလုံလောက်သေးရင် ထပ်မံချဲ့ထွင်ဖို့ microSD card slot လည်း စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ 4600 mAh Li-ion Battery တပ်ဆင်ပေးထားကာ ဘက္ထရီသက်တမ်း ၇နာရီကျော် ဆက်တိုက်သုံးစွဲနိုင်မှာပါ။
အင်တာနက်ချိတ်ဆက် သုံးစွဲဖို့ကတော့ Wi-Fi စနစ်တစ်မျိုးတည်း ရှိကာ အလေးချိန် 338 ဂရမ်ဖြစ်ပြီးတော့ သုံးစွဲထားတဲ့ ချစ်ပ် Snapdragon 600 ဆိုတာက ဝေဖန်စရာ တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နောက်ဆုံးပေါ်မဟုတ်လို့ပါ။
ဒီဇိုင်းလေးက လှပပြီး ဒေါ်လာ ၃၅၀ ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ OS က Android 4.2.2 (Jelly Bean) ဖြစ်ပြီးတော့ Power ခလုတ်နဲ့ အသံအတိုး/အကျယ် ခလုတ်တွေဟာ Tablet ရဲ့ ညာဘက်မှာ ပါဝင်နေတာပါ။
Kangyi ( Myanmar Consumer Guide)
Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under ဗဟုသုတ | No comments
SWAT (Special Weapons And Tactics) လို့အမည်ရတဲ့ အမေရိကန်မှ အထူးကွန်မန်ဒို တပ်ဖွဲ့ဟာ ကမ္ဘာက အသိအမှတ်ပြုရလောက်အောင် ထူးချွန် ထက်မြတ် ကြပါတယ်။
၁၉၆၄ ခုနှစ်က စတင်ဖွဲ့စည်းပေမယ့် ၁၉၆၇ ခုနှစ်မှ လော့အိမ်ဂျစ်လစ်မြို့ က LAPD (လောအိမ်ဂျလစ် ရဲဌာနချုပ်) ကနေ သေချာ ဖွဲ့စည်းဖြစ်တာ ဖြစ် ပါတယ်။ အစက LAPD နဲ့ ပူးတွဲပေမယ့် နောက်တော့ SWAT ဆိုတာကို သီးခြား အဖွဲ့တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်စေခဲ့ ပါတယ်။ ဒီအတွက်လည်း သေ ချာ လေ့ကျင့်မှု ပြုလုပ်ထားပေးပြီး အမေရိကန်မှ အတော်ဆုံး ရဲများ စုစည်းရာလို့တောင် ပြောစမှတ်ပြု ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သူတို့လိုပဲ FBI, CIA တို့ ရှိနေသေးပေမယ့် SWATက Local ကို ဦးစားပေးတဲ့ အဖွဲ့ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ FBI, CIA တို့မှ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေး တို့ ပြုလုပ်ပေ မယ့် SWAT ရဲ့  လုပ်ဆောင်ချည်းကတော့ သိပ်မများပါဘူး။
SWAT Team ရဲ့  Duty အနေနဲ့က ဓားစာခံ ကယ်တင်ခြင်း၊ ပဋိပက္ခ ဖြစ် ပွားမှုကို ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ VIP ကာကွယ် စောင့်ရှော့င့်ခြင်း၊ ဝရမ်းပြေးဖမ်းဆီး မှုအတွက် ကူညီထောက်ပံ့ခြင်း၊ အရေးပေါ် အခြေအနေအတွက် လုံခြုံရေး ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ အရေးပေါ် အခြေအနေတွင် ပြဿနာ များ ဖြေရှင်းခြင်း အစရှိတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် များကို အဓိက ထား ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ အဓိကကတော့ တိုက်ပွဲ ဝင်ဖို့ပါပဲ။
လက်နက် မကြီး၊မငယ် အရွယ်အလတ်စားများကို အဓိကထား အသုံးပြု ပါတယ်။ စက်သေနတ်၊ ရိုင်ဖယ်၊ သေနတ်တို၊ စနိုက်ပါ၊ လက်ပစ်ဗုံး၊ မီးခိုးဖုံး တို့ကို အဓိကထား အသုံးပြု ပါတယ်။ အဓိက အောင်မြင်မှု ၂ ခု အနေနဲ့ ၁၉၇၄ ခုနှစ်ကျော်က အမေရိကန်မှာ ကြီးထွားခဲ့တဲ့ SLA သူပုန်အဖွဲ့အစည်း ကို ဖြိုခွင်း လိုက်နိုင်ခဲ့ပြီး SWAT မှာ တစ်ယောက်မှာ မသေပါဘူး။ ပြီးတော့ ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှာ Colardo မှာ Columbine High School massarcre မှာလည်း အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံတစ်ဝန်းက မှုခင်း၊ ပစ်ခတ်မှု၊ အကြီးအသေး နေရာစုံမှာ ပါဝင်ပြီး အောင်မြင်တဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့မှာ SWAT Team ဟာ ကမ္ဘာ အတော်ဆုံး ကွန်မန်ဒို ရဲတပ်ဖွဲ့ စာရင်းထဲမှာ ပါဝင်လျက် ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
nokia ဖုန်းတော်တော်များများကိုမြန်မာစာထည့် ချင်တဲ့ သူတွေအတွက်
nokia ဖုန်းတော်တော်များများကိုမြန်မာစာထည့် ချင်တဲ့ သူတွေအတွက်ပါ။samsung ,LG , Sonny တစ်ချို့ ဖုနုးတွေအတွက်တောင်ပါပါတယ်။ မြန်မာဖောင့် သွင်းလို့ ရမဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစား
Nokia N71*. Nokia N73
Nokia E51*. Nokia E63
Nokia 6760 Slide*. Nokia 6790 Surge
(Corresponds to Symbian^1 )
(or PR1.0,1.1,1,2,Symbian Anna ) 5.2 9.5
nokia ဖုန်းတွေကိုမြန်မာစာထည့် သွင်းဖို့ အတွက်ဆိုရင် ဖုန်းကိုအရင်ဆုံး hack ရပါမယ် အဲဒီအတွက် အရင်ဆုံးလိုအပ်တဲ့ ဖိုင်လေးကို ဒေါင်းလိုက်ပါ။
( အဆင့် ၁. )
( အဆင့် ၂ )
NortonSymbian.sisx ကို Install လုပ်ပြီးရင် ဖွင့် လိုက် ပါ.....Options ကိုသွားပါ..Anti-Virus ကိုထပ်သွားပါ..
Quarantine list ကိုရွေးပါ..
( အဆင့်၃ )
Options ကိုနှိပ်ပြီး ..Restore ကိုနှိပ်ပါ..
Yes or No ပေါ်လာရင် Yes ကိုနှိပ်ပါ..ပြီးရင် Exit ကိုနှိပ်ထွက်ပါ..
( အဆင့်၎ )
ဖုန်း Settings ထဲ Application mgr(manager) ကိုသွား.. ကျလာတဲ့ အထဲက Symantec Symbian H***
ဆိုတဲ့စာတန်းကိုရှာပြီး uninstall လုပ်ပေးပါ..ပြန်ထွက်..
( အဆင့်၅ )
စောစောက ဒေါင်းထားတဲ့ အထဲက RomPatcherPlus_ 3.1 lite.sisx ကို install လုပ်လိုက်ပါ..
ပြီးရင် RomPatcherPlus ဆီသွားပြီး ဖွင့်ပါ..Install Server RP+ နဲ့ Open4all RP+ ဖိုင်နှစ်ခုကိုတွေ့ရပါမယ်..
တခုချင်းဆီကိုနှိပ်ပါ.Options ကိုသွားပါ..All Patches ကို နှိပ် Apply ကိုထပ်နှိပ်ပါ..
နောက်ထပ်ဖိုင်တစ်ခုကို လည်း အဲ့ဒီ အတိုင်းလုပ်ပါ..
ပြီးရင် ဖုန်းကို hack တဲ့ အဆင့်ပြီးသွားပါပြီ.
ဒေါင်းလုပ်ယူထားတဲ့ အထဲမှာ မြန်မာ ဖောင့်ဖိုင်ပါပါတယ် ..Memory crad ရဲ့ ကိုယ့်ထည့်ထားတဲ့နေရာ မှာသွားရှာပြီး install လုပ်လိုက်ပါ..ဘာမေးမေး လုပ်မယ်ပဲ ဖြေပေးပါ...
ဲပြီးပြီဆိုတာနဲ့ ဖုန်းကို Restart သာချလိုက်ပါ။
pdf file လေးအနေနဲ့ သိမ်းထားမယ်ဆိုရင် Downloadယူရန်
ထမင်းခြောက်နဲ့ထန်းလျက် လဲ၊ ထန်းလျက် ၂ ပိဿာ
ထမင်းခြောက် ရွာအနောက်ပိုင်းက မိဖား ရောင်း- ၀တ္ထု ၁၀၀ ကျပ်
ကျောင်းခြံစည်းရိုးမှ မန်ကျီးသီးရောင်း - ၀တ္ထုငွေ ၂၀၀ ကျပ်
နောက်ထပ် ရောင်းဘို့ ထမင်းခြောက်လက်ကျန် တစ်တင်းခွဲဝင်အိတ်နဲ့ ၂ အိတ်
(ကပ္ပိယကြီး ဦးညိုကြီး၏ ဒိုင်ယာယီ)
ဘယာကြော်ငါးခုဘိုး- တောင်ပိုင်း ဒေါ်ခွေး
ကြက်သွန်ပေါင်းကြော်- ဆယ်ခု အနောက်ပိုင်းက ဒေါ်ကြီးမတင်ပု
(အကြော်သည်မ မပု ဒိုင်ယာယီ)
မောင်ကံသာ၏ နွားခိုးမှု- 10. 09. 2008
ဦးလှထွန်းနှင့် ဦးညီပုတို့၏ ကုမ္ပဏီပြဿနာ - 18. 10. 2008
မောင်နိုင်မိုးနှင့်မခင်နွယ် မင်္ဂလာပွဲ- 20. 11. 2008
ကိုဖိုးကွန်း ခြံမြေရောင်းဝယ်မှုပြဿနာ- 01. 01. 2009
ဆယ်တန်းအောင်စာရင်းထွက်သည့်နေ့- ငါးဘာသာဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင် 10. 07. 2008
ဆေးတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရခဲ့- 10. 12. 2008
ဆေးတက္ကသိုလက် စတင်တက်ရောက်ခဲ့- 01. 06. 2009
(ဆေးကျောင်းသူ မအေးမြတ်စန္ဒာ၏ ဒိုင်ယာယီ)
ဒိုင်ယာယီဆိုတာ မှတ်တမ်း၊ ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ ထူးထွေမှုလေးတွေထဲက ထူးခြားမှုလေးတွေ၊ အလုပ်မှာ မေ့ သွားမှာစိုးရိမ်ပြီး ရေးမှတ်ထားကြတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့။ အဆိုးတွေ ပါတတ်သလို အများ အားဖြင့်ကတော့ အကောင်းလေးတွေချည်း ရေးမှတ်တတ်ကြပါတယ်၊ သူခိုးတစ်ယောက်ရဲ့ဒိုင်ယာယီ ထဲမှာတော့ သူခိုးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေ ရေးမှတ်ကောင်းမှတ်ပါမယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူ့အိမ်က ဘယ်လောက် ဘယ်မျှဆိုတာကိုတော့ မှတ်သားလေ့မရှိပါဘူး၊ ဘာကြောင့်ဆို အဲဒီလိုမှတ်ခဲ့ရင် အဲဒီဒိုင်ယာယီဟာ တစ်နေ့သူ့ကိုဒုက္ခပေးတတ်လို့ပါ၊ လူသတ်သမား တစ်ယောက်ဟာလည်း သူ့ရေး မှတ်တမ်းဒိုင်ယာယီထဲမှာ သူသတ်ခဲ့တဲ့ လူတွေရဲ့နာမည်စာရင်းကို မှတ်သားလေ့မရှိပါဘူး၊ ခုနပြောသလိုပါပဲ သူ့ရဲ့ဒိုင်ယာယီက သူ့လည်ပင်းကို သူကိုယ်တိုင် ကြိုးစားကွင်းစွပ်မှာစိုးလို့ပါ၊ လောက ဒိုင်ယာယီ၊ ဒီဒိုင်ယာယီကို ဗဟိဒ္ဓ- ခန္ဓာကိုယ် အပြင်ပက ဒိုင်ယာယီလို့ ခေါ်ပါတယ်။
အဲဒီဗဟိဒ္ဓဒိုင်ယာယီဆိုတာကတော့ ကိုယ်ရေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကို ရွေးပြီး တော့ ရေးလို့ရပါတယ်၊ ကိုယ်မလိုတာတွေ မရေးဘဲထားလို့လည်း ရပါတယ်၊ အကောင်းလေးတွေကိုပဲ ရွေးနှုတ်ပြီး ရေးတတ်ကြတာကတော့ ထုံးစံပါပဲ။ အဲဒီဒိုင်ယာယီရေးဘို့က အနည်းဆုံးစာကိုရေးတတ် ဖတ်တတ်ဖြစ်ရပါမယ်၊ စာအုပ်တစ်အုပ်၊ ဘော့ပင်တစ်ချောင်း (ဒါမှမဟုတ်) ခဲတံတစ်ချောင်းလိုပါမယ်၊ ပညာတတ်အသိုင်းဝိုင်းတွေကတော့ ဒိုင်ယာယီစာအုပ်ဆိုပြီး သီးသန့်ထားကြပါတယ်၊ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းက ကပ္ပိယကြီးတို့လိုလူမျိုးကတော့ ကျောင်းမှာရှိနေတဲ့ သူနေတဲ့ ဇရပ်နံရံဟာ သူ့အတွက် ဒိုင်ယာယီပါပဲ၊ မီးသွေးခဲတစ်ခဲ (ဒါမှမဟုတ်) မြေဖြူခဲအတိုတစ်ချောင်းရှိရင် သူ့အတွက် သူ့ဒိုင်ယာယီ ရေးသားခြင်းကိစ္စပြီးပါတယ်၊ အကြော်သည်မ မပုတို့လိုမျိုးကျတော့လည်း ဗလာစာအုပ်တစ်အုပ်ဆို သူ့အတွက် ဒိုင်ယာယီရေးဘို့ပြည့်စုံပါပြီ။ ဒါတွေက ဗဟိဒ္ဓဒိုင်ယာယီတွေပေါ့။
ဗဟိဒ္ဓဒိုင်ယာယီကိုရေးကြသလို မဖြစ်မနေရေးသင့်တာကတော့ အဇ္ဈတ္တဒိုင်ယာယီပါပဲ၊ ကိုယ်တွင်း ဒိုင်ယာယီပေါ့၊ နှလုံးသားထဲမှာ ရေးရတဲ့ ကိုယ်တွင်းဒိုင်ယာယီပါ၊ အဲဒါက ဟောဒီပစ္စုပ္ပန် လောက တစ်ဘ၀စာတွင်မဟုတ်ပါဘူး၊ သံသရာအတွက်ပါ အရေးပါမှာမို့ပါ၊ ရေးသင့်ပါတယ်၊ ရေးဘို့ အလွန်ပဲ လိုအပ်ပါတယ်၊ ဗဟိဒ္ဓဒိုင်ယာယီမှာကတော့ ကိုယ်ရေးလိုရာတွေ ရွေးရေးလို့အဆင်ပြေ ပေမယ့် အဇ္ဈတ္တဒိုင်ယာယီမှာကတော့ ကိုယ်အကြောင်း ကိုယ်လုပ်တဲ့အကြောင်း မချွင်းမချန် အားလုံးရေးသားဘို့ရေးသားဘို့လိုပါတယ်၊ ဗဟိဒ္ဓဒိုင်ယာယီက လိမ်လို့ရ ညာလို့ရပါတယ်၊ အဇ္ဈတ္တဒိုင်ယာယီမှာကတော့ လိမ်လို့ညာလို့ မရပါဘူး၊ အဲဒီလိုလုပ်ရင်လည်း အနည်းဆုံး ကိုယ်လုပ်တာကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က သိနေပါတယ်၊ လိမ်လည်း ကိုယ်ခံ၊ မလိမ်လည်း ကိုယ်အတွက် ချည်းပါပဲ၊ ဘယ်လိုရေးကြမလဲ၊ ဒီလိုလေးရေးရပါမယ်။
၁။ နှလုံးသားဆိုတဲ့ စာမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ (နှလုံးသားစာအုပ်)
၂။ စိတ်ဆိုတဲ့ ကလောင်တံလေးနဲ့
၆။ ငါဒီနေ့ ဘာတွေ လုပ်ခဲ့သလဲ၊ ဘာတွေပြောခဲ့သလဲ၊ ဘာတွေတွေးခဲ့သလဲ
မင်္ဂလာဆောင်အပြန် လူငါးဦး ပါ ကိုယ်ပိုင်ပရာဒိုကားတစ်စီး ယာဉ်မောင်းအိပ်ငိုက်၍ တိမ်းမှောက်သဖြင့် ယာဉ်မောင်းအပါအဝင် နှစ်ဦး သေဆုံးပြီး သုံးဦး ဒဏ်ရာပြင်း ထန်စွာရရှိခဲ့ကြောင်း၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး တောင်ငူခရိုင် အုတ်တွင်း မြို့နယ်တွင် နိုဝင်ဘာ ၄ ရက် နံနက်ပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ မန္တလေးမြို့မှ ရန်ကုန်သို့အပြန် ယာဉ်မောင်း ခင်မောင်ကျော် (၄၄ နှစ်) ကျောင်း တော်ရာ ပွင့်ဖြူမြို့နယ် မောင်းနှင် လာသော ကိုယ်ပိုင်ပရာဒိုကား အမှတ် ၃ဃ/--- သည် နိုဝင်ဘာ ၄ ရက် နံနက် ၅ နာရီက အမြန် လမ်းမကြီး အုတ်တွင်းမြို့နယ် မိုင် တိုင်အမှတ် (၁၂၁/၂နှင့် ၁၂၁/၃) အကြားအရောက် ယာဉ်မောင်း အိပ်ငိုက်ရာမှ လမ်းလယ်ရှိကွန် ကရစ်ကျွန်းတိုင်များကို တိုက်မိပြီး ယာဉ်တိမ်းမှောက်သွားသည်။
ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် ယာဉ် မောင်း ခင်မောင်ကျော်၊ ဦးဇော်လွင်၊ ဒေါ်ထွေးယုံ၊ ဒေါ်သိန်းသိန်းနှင့် မဖူးပွင့်သက်တို့သည် ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာများရရှိကာ ဖြူးပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီး အရောက်တွင် ယာဉ်မောင်း ခင်မောင်ကျော်နှင့် ဦးဇော်လွင်တို့နှစ်ဦးသည် ဒဏ်ရာ များဖြင့်သေဆုံးသွားကြပြီး ကျန် လူနာများကို ရန်ကုန်မြို့သို့ ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း သိရသည်။
ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုသတင်းရလျှင်ရချင်း အမြန်လမ်းမကြီး ၁၁၅ မိုင်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း အရေးပေါ်ရှေးဦးပြုစုခြင်းစခန်းမှလူနာတင်ယာဉ်တစ်စီးနှင့် တာဝန်ခံ ဒေါ်သန်းသန်းမြင့်နှင့် အဖွဲ့၊ ၁၂၂ မိုင်ရှိ အာရောဂျံခြံမှ ဦးကိုကိုကြီး နှင့် ကုသိုလ်ဖြစ် လူနာတင်ယာဉ် တစ်စီးနှင့် ဗောဓိကုန်းရဲစခန်းမှ လူနာတင်ယာဉ်တစ်စီးတို့ ရောက်ရှိ ကြပြီး လူနာများကို ဖြူးဆေးရုံကြီးသို့ တင်ပို့ခဲ့ကြသည်။ အမှုကို အမြန် လမ်းမကြီး ဗောဓိကုန်းရဲစခန်းက အရေးယူထားကြောင်း သိရ သည်။
ငါးမန်းများ ရရှိရေး အတွက် စတေး ခံနေရသည့် လင်းပိုင်များ
လင်းပိုင်ဟု ဆိုလိုက်လျှင် ပြုံးချိုသော မျက်နှာလေးများရှိပြီး လူသားများနှင့် ယဉ်ပါး ကျွမ်းဝင်တတ်သည့် ရေနေ သတ္တဝါလေးများကို ချက်ချင်း မြင်ယောင်မိကြမည် ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း အဆိုပါ ချစ်စရာ လင်းပိုင် လေးများသည် ခိုင်မာမှု မရှိလှသည့် အကြောင်းပြချက် တစ်ခုကြောင့် ၎င်းတို့ ခင်မင်ရင်းနှီး ကျွမ်းဝင် လိုသည့် လူသားများ၏ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်မှုများနှင့် ကြုံတွေ့ နေရခြင်းမှာ ဆိုးရွားလှသည့် ဝဋ်ကြွေးတစ်ခု အဖြစ် ယူဆရမည် ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် တောင်အမေရိက တိုက်ရှိ ပိရူးနိုင်ငံမှ ငါးမန်းဖမ်း ရေလုပ်သားများသည် ၎င်းတို့အနီး ချဉ်းကပ်လာသည့် လင်းပိုင်များကို ဆွဲယူ သတ်ဖြတ်လေ့ ရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ လင်းပိုင် ချစ်သူများအတွက် ပို၍ ရင်နာစရာကောင်းသော အချက်မှာ ထိုသို့ သတ်ဖြတ်ခြင်းသည် ငါးမန်းမျှားရန် အတွက် အလွယ်တကူ ရရှိလာသည့် လင်းပိုင်များဖြင့် အစားထိုး ဆောင်ရွက်နေကြခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ပိရူးအစိုးရက လင်းပိုင်များကို သတ်ဖြတ်ခွင့် မရှိဟု ဥပဒေ ထုတ်ပြန်ထားသော်လည်း ၎င်းတံငါသည်များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည့်ပြည့်ဝဝ အကာအကွယ် မပေးနိုင်ခဲ့ပေ။
ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာ၏ ရေလှိုင်းများကြားတွင် စက်လှေနား ချဉ်းကပ်လာသည့် လင်းပိုင် လေးတစ်ကောင်ကို စူးရှ ထက်မြက်သည့် မှိန်းတံဖြင့် ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ်နေသည့် ငါးဖမ်း လုပ်သားတစ်ဦး၏ မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံ များသည် ၎င်းဒေသရှိ လင်းပိုင်များ၏ ချောက်ချား ကြေကွဲစရာ ဘဝကို နိမိတ် ထင်ဟပ်စေခဲ့သည်။ လူသား များကို ခင်မင်ရင်းနှီးဟန်ဖြင့် ပျော်မြူးစွာ ချဉ်းကပ်လာသည့် လင်းပိုင်လေးများသည် ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ ပစ်ခတ်သည့် မှိန်းတံ၏ လက်ချက်အောက်တွင် ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဝေဒနာ ခံစားရပြီး အသက်ပျောက် သွားလေ့ ရှိသည်။ ထို့နောက်တွင်မူ ငါးမန်းဖမ်း ရေလုပ်သားများက အူအခွေလိုက် ထွက်ကျလာသည့် လင်းပိုင်ကို လှေပေါ်သို့ ဆွဲတင်လိုက်ကြသည်။ ယင်းနောက် ရရှိလာသည့် လင်းပိုင်ကို ခုတ်ထစ်ကာ ငါးမန်းများကို ဆွဲဆောင်သည့် ငါးစာအဖြစ် ပြန်လည် အသုံးပြုကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်း မှတ်တမ်းရယူရန် ငါးဖမ်း စက်လှေပိုင်ရှင်နှင့် ညှိနှိုင်း၍ လှေပေါ်လိုက်ပါသည့် Daily Mail သတင်းဌာန၏ အယ်ဒီတာ တစ်ဦးဖြစ်သူ ဂျင်မ်ဝစ်ကန်စ်က 'မှိန်းထိသွားတဲ့ လင်းပိုင်က ကြောက်အားလန့်အားနှင့် ရေကူးပြီး ပြေးပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ မှိန်းနောက်မှာ တွဲချည်ထားတဲ့ ကြိုးကြောင့် အဝေးကြီးတော့ မရောက်ခဲ့ပါဘူး၊ ယင်းနောက်မှာတော့ သွေးအလူးလူးနဲ့ သေအံ့မူးမူး ဖြစ်နေသော လင်းပိုင်ကို လှေနား ကပ်ဆွဲပြီး သံမဏိ ချိတ်ကောက်ကြီးဖြင့် ခေါင်းကို ဖောက်ချိတ်၍ ဆွဲတင်လိုက်တော့ တာပါပဲ၊ ဒဏ်ရာကနေ အူတွေ အခွေလိုက် ထွက်ကျနေတာကို ကျွန်တော်မြင်တယ်၊ သူသေသွားပြီလို့ ထင်ပေမဲ့ သင်္ဘော ကုန်းဘက်ပေါ်မှာ တွန့်လိမ် အကြောဆွဲ နေတုန်းပါပဲ' ဟု ဂျင်မ်က စိတ်မကောင်းခြင်း ကြီးစွာနဲ့ ပြောကြားခဲ့သည်။
''ကျွန်တော်ဟာ ကမ်းခြေကနေ ကီလိုမီတာ ၁ဝဝ လောက် အကွာက ငါးဖမ်းလှေပေါ် ရောက်နေတယ်၊ လှေနား တစ်ဝိုက်မှာတော့ တခြား တံငါလှေ အများအပြားကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်၊ တံငါသည်များ အနေဖြင့် လင်းပိုင်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ၎င်းတို့၏ လုပ်ရပ်ကို သာမန်လို့ပဲ သဘောထားကြောင်း၊ ၎င်းလုပ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့က စက်ဆုပ်တဲ့ အမူအရာမျိုး ပြလိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့ အတွက် အန္တရာယ် များသွားမှာ စိုးရိမ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်တော်နှင့် ဓာတ်ပုံ ဆရာတို့က အမိအရ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးပြီး ကမ္ဘာက သိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပဲ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါကြောင်း'' ဟု ဂျင်မ်က ပြောကြားခဲ့သည်။ ပိရူး တံငါသည်တို့၏ ဒေသ အခေါ်အဝေါ်အရ လင်းပိုင်များကို ပင်လယ်ဝက်ဟု အမည် ပေးထားကြောင်း၊ ၎င်းလင်းပိုင်များ၏ ခန္ဓာကိုယ်တွင် သွေး အမြောက်အမြား ဖွဲ့စည်းပါရှိရာ သွေးညှီနံ့ ကြိုက်သည့် ငါးမန်းများ အတွက် အကောင်းဆုံး ဆွဲဆောင်မှုလည်း ဖြစ်နေသည်။
ဂျင်မ်လိုက်ပါလာသည့် လှေပေါ်မှ လှေသူကြီးက ၎င်းတို့၏ လုပ်ရပ်သည် ဥပဒေမဲ့ လုပ်ရပ် ဖြစ်သည်ကို သိရှိ ထားသော်လည်း လိုအပ်၍ လုပ်ဆောင်နေခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဟု ခံယူချက် ထားသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိ ရသည်။ ထို့ပြင် အဆိုပါ ငါးဖမ်းလှေများသည် တစ်နှစ်လျှင် ပင်လယ်ပြင်သို့ (၁၂) ကြိမ်ခန့် ငါးဖမ်းထွက် ကြောင်း တစ်ကြိမ်လျှင် လင်းပိုင် အကောင်ရေ နှစ်ကောင်မှ သုံးကောင် အထိ ဖမ်းဆီး သတ်ဖြတ်လေ့ ရှိပြီး ရာဂဏန်းထိ ရှိသည့် ငါးမန်းများကို ဖမ်းဆီးနေ။
မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး အောင်မြေသာဇံမြို့နယ် (၁၉) လမ်း နန်းရှေ့မုန်တိုင် ဓမ္မာရုံ၌ မြန်မာ့ရိုးရာ သိုင်းပြောင်းပြန် ပညာစဉ် တိမ်ကောပပျောက်သွားခြင်း မရှိစေရန်၊ လက်ဆင့်ကမ်း ထိန်းသိမ်းသည့် ပညာရှင်များ ပေါ်ပေါက်လာစေရန်၊ ပညာညီအစ်ကို အချင်းချင်း စည်းလုံး ညီညွတ်စေပြီး မြန်မာ့ရိုးရာ သိုင်းပညာရပ် များ ပြန့်ပွားအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ခူးကာချမ့် ကမ္ဘောဇ နန်းတွင်းသိုင်းပြောင်းပြန် ပင်မနာယက ဆရာကြီး ဦးမောင်လေးနှင့် ဆရာကြီး ဦးအေးနိုင် (နန်းတော်ရှေ့) တို့အား ပညာစဉ်၊ သမားစဉ် ဂါရဝပြုခြင်း အခမ်းအနားကို ယမန်နေ့က ကျင်းပသည်။ အခမ်းအနားတွင် သိုင်းပြောင်းပြန် ပညာစဉ် ပူဇော်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေး နာယက ဦးသန်းမောင်က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားပြီး ရန်ကုန်သိုင်းပြောင်းပြန် ပင်မဦးစီးမှ ဆရာဦးသိန်းအေးက ခူးကာချမ့် ကမ္ဘောဇနန်းတွင်း သိုင်းပြောင်းပြန် နာယက ဆရာကြီးများ၏ ပညာစဉ်နှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များကို ရှင်းလင်း ပြောကြားသည်။ ထို့နောက် ဆရာဦးကျော်ဆောင်းက မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ကိုယ်စားပြု သိုင်းပြောင်းပြန် အဖွဲ့၏ လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်မှုများကို ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။ ဆက်လက်၍ သိုင်းပြောင်းပြန် ပညာစဉ်များကို သိုင်းပြောင်းပြန် အဖွဲ့အသီးသီး၏ ဆရာများနှင့် တပည့်များက တစ်ဦးချင်း၊ အဖွဲ့လိုက် သိုင်းစွမ်းရည်များ ပြသကာ သိုင်းပြောင်းပြန် ပညာစဉ်ပူဇော်ပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာဦးဝင်းဌေးက ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသည်။ သိုင်းပြောင်းပြန် ပညာရပ်တွင် ဗန်တိုခေါ် လက်နက်မဲ့ တိုက်ခိုက်နည်းပညာ၊ ဗန်ရှည်ခေါ် လက်နက်ဖြင့် တိုက်ခိုက်နည်းပညာများ ပါဝင်သည်။ လက်နက်ဖြင့် တိုက်ခိုက်နည်းတွင် လက်နက် အတို၊ အရှည်နှစ်မျိုးစလုံးကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးချနိုင်ရန် သင်ကြားပေးသော ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တျောင်းယု ကျွန်းများအရေး ဂျပန်နိုင်ငံနှင့်အတူ ကာကွယ်ရန် အစီအစဉ်မရှိဟု အမေရိကန် ပြောကြား
Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
အမေရိကန်နိုင်ငံသည် အငြင်းပွားလျက်ရှိသော တျောင်းယုကျွန်းများအား တရုတ်နိုင်ငံ၏ံ တိုက်ခိုက်နိုင်ဖွယ်ရှိမှုကို ကာကွယ်ရေးအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် အတူပူးတွဲ စစ်ဆင်မှုတစ်ရပ် ပြုလုပ်သွားရန် အစီအစဉ်မရှိကြောင်း ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ဂျက်ဖ်ပူးလ်က ပြောကြားခဲ့သည်ဟု နိုဝင်ဘာ ၄ ရက် အင်တာနက် သတင်းတစ်ရပ်အရ သိရသည်။ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်ဝါရှင်တန် ဒီစီတွင် ပြုလုပ်သော သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ တစ်ရပ်၌ တျောင်းယုကျွန်းများအား တရုတ်နိုင်ငံက တိုက်ခိုက်ခဲ့လျှင် အမေရိကန်အနေဖြင့် ဂျပန်အားထောက် ကူပေးရန် ရှိ၊ မရှိမေးမြန်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ပူးလ်ကထိုသို့ ဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ လွန်ခဲ့သော စက်တင်ဘာလ အတွင်း၌ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဝီလျံဘန်းနှင့် ဂျပန်လွှတ်တော် ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် နတ်ဆူအိုယာမာဂူချီတို့ ဝါရှင်တန်ဒီစီတွင် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးစဉ် အဆိုပါကျွန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဂျပန်နိုင်ငံအား ထောက်ကူပေးမည်ဟု အမေရိကန်နိုင်ငံက ထပ်လောင်း အတည်ပြု ပြောကြား ခဲ့ကြောင်း ဂျပန်နိုင်ငံပိုင် Kyodo သတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့မှုကို ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီးပူးလ်က ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
တရုတ်နှင့် ဂျပန်အကြား နယ်နိမိတ် အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဘက်လိုက် ဆောင်ရွက်ရန် ဆိုသည်မှာ အမေရိကန် အစိုးရ၏ မူဝါဒ မဟုတ်ကြောင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းသော နည်းဖြင့်ဖြေရှင်းရန် နှစ်ဖက်စလုံးအား အမေရိကန်နိုင်ငံ အနေဖြင့် တိုက်တွန်းထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပြောကြားခဲ့သည်။
ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ပြုလုပ်မည့် ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲသည် အကျိုးအမြတ် ရရှိမည် မဟုတ်ကြောင်း တောင်ကိုရီးယား သမ္မတ ပြောကြား
ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံတို့၏ လက်ရှိနှင့် အနာဂတ် ဆက်ဆံရေးသည် အားရကျေနပ်ဖွယ် အခြေအနေတစ်ရပ်သို့ ရောက်ရှိနိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်းနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံသည် ယခင်ကျူးလွန်ခဲ့သော ပြစ်မှုများအတွက် တောင်းပန်ရန် ပျက်ကွက် ခဲ့သောကြောင့် ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေးနှင့် ပြုလုပ်မည့် ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲသည် အကျိုးအမြတ် ရရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း တောင်ကိုရီးယား သမ္မတ ပတ်ဂွမ်ဟေးက ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်မည့် အလည်အပတ် ခရီးစဉ်မတိုင် မီ နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်၌ ဘီဘီစီ သတင်း ဌာနနှင့် ပြုလုပ်သည့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း တစ်ခုတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
မကြာသေးမီလများက အမေရိကန် နိုင်ငံသည် အာရှဒေသရှိ ၎င်း၏အဓိက စစ်ရေး မဟာမိတ် နိုင်ငံများဖြစ်သည့် တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့ အကြား ပြန်လည် သင့်မြတ်မှု ရရှိရန်ကြိုးပမ်း ခဲ့သော်လည်း အနည်းငယ်သာ တိုးတက်မှုရှိခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာ အသိုက်အဝန်းက မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံ ၏ နျူကလီး ယား ဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်များနှင့် ပတ်သက်သည့် သဘောတူညီချက် တစ်ရပ် အကောင် အထည် ဖော်ရန် တစိုက်မတ်မတ် ကြိုးပမ်း နေချိန် တွင် တောင်ကိုရီး ယားနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့၏ ဆက်ဆံရေး မပြေလည်မှုများသည် အဓိကပြဿနာ တစ်ရပ်ဖြစ်လာသည်။ တောင်ကိုရီးယားနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့ သည် တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်မည့် ၆ နိုင်ငံ ဆွေးနွေးပွဲအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲများ ပြန်လည်စတင်ရန် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိကြောင်း ထင်မြင်ချက်များ တိုးမြင့် ဖြစ်ပေါ် လျက် ရှိသည်။မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံဆိုင်ရာ နှစ်နိုင်ငံ သံတမန်များသည် ဆွေးနွေးပွဲများ ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် တွေ့ဆုံမှုများ ဆက်လက် ပြုလုပ်နေသော်လည်း ပတ်ဂွမ်ဟေးနှင့် အာဘေးတို့၏ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ တစ်ရပ်သည် မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံနှင့် ညီညွတ်သည့် အင်အားစု တစ်ရပ်အဖြစ် ပြသရာတွင် အရေးပါသည့် ဆွေးနွေးပွဲတစ် ရပ် ဖြစ်လာမည်ဟု လေ့လာ ဆန်းစစ်သူများက ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဂျပန်မော်ဒယ်လေး Mayu Watanabe ရဲ့အတွင်းခံဖက်ရှင်..
Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under ဓါတ်ပုံများ | No comments
နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ဝ၆း၃ဝ နာရီတွင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်မည့် အခြေအနေ GFS မော်ဒယ် ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်
Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under မိုးလေ၀သသတင်း | No comments
(မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်မည့် လေတိုက်နှုန်း ခန့်မှန်း 23-28 knots)
ဂျော်ဒန်နိုင်ငံရှိ ဆီးရီးယား ဒုက္ခသည်များအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ယန်း ၁ ဘီလီယံ ထောက်ပံ့မည်
ဆီးရီးယားမှ ဒုက္ခသည် ထောင်ပေါင်းများစွာကို လက်ခံထားသော ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ၏ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို လျော့ကျစေရန်အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံက ယန်း ၁ ဘီလီယံ (အမေရိကန် ဒေါ်လာ၁ဝ ဒသမ ၁ သန်း) ထောက်ပံ့ ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ စီမံရေးရာ ဝန်ကြီး အီဘရာဟင်မ်ဆေ့ဖ်က နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်ဟု အင်တာနက် သတင်းတစ်ရပ်အရ သိရသည်။ ဂျော်ဒန်နိုင်ငံသည် ဒေသတွင်း နိုင်ငံရေး အခြေအနေများကြောင့် စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများ ရင်ဆိုင်နေရသည့် အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ထိုကဲ့သို့ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၎င်းငွေကြေးများကို ဒုက္ခသည် စခန်းများတွင် မိလ္လာကန်နှင့် ရေတိုင်ကီများ ဝယ်ယူရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် အသုံးပြုသွားမည်ဟု ၎င်းကထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းနယ်စပ်အနီး Zaatari ဒုက္ခသည်စခန်းရှိ ဒုက္ခသည် ၁ဝဝ,ဝဝဝ ကျော်အပါအဝင် ဆီးရီးယား ဒုက္ခသည်ပေါင်း အနည်းဆုံး ၅ဝဝ,ဝဝဝ ခန့်ရှိကြောင်း သိရသည်။
၂ဝဝ၇ ခုနှစ်မှ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ဂျပန်နိုင်ငံသည် ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ အတွင်းရှိ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး စီမံကိန်းများအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၇၃ သန်း ထောက်ပံ့ပေး ခဲ့ကြောင်း ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ စီမံရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
Ringtone သံ တစ်မျိုးတည်းပဲ ကြားနေရတာဟာ တစ်ခါတစ်လေ ..
ညည်းငွေ့စရာကောင်းပါတယ်။ ဖုန်းလာတိုင်း Ringtone သံ ..
တစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုး ပြောင်းလဲပြီး မြည်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ..
Ringtone Randomizer နဲ့ ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ မိမိ နှစ်သက်ရာ ..
Ringtone များကို ရွေးချယ်ပေးထားပြီး ဖုန်းတစ်ခါလာတိုင်း ..
Ring သံ တစ်မျိုးစီ ပြောင်းပေးပါတယ်။ Ringtone အပြင် ..
Notification အသံများကိုလဲ Random စနစ်ဖြင့် အမျိုးမျိုး ..
ပြောင်းသွားအောင် လုပ်ပေးတယ်။ ကျွန်တော်ဆို သဘောကျတဲ့
Ringtone သုံးမျိုးလောက် ရွေးပေးထားတယ်။ ဖုန်းလာတိုင်း ..
တစ်မျိုးစီ အလှည့်ကျ ပြောင်းပေးနေတော့ လန်းတယ်ဗျ။
အသုံးပြုပုံကလဲ လွယ်ပါတယ်။ ကိုယ်ထည့်ထားချင်တဲ့ အသံများကို
ရွေးပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ အပေါ်ဆုံးက Phone Ringtone ဆိုတာကို
အမှန်ခြစ်ပေးပြီး on လိုက်ရင် စတင် အလုပ်လုပ်ပါပြီ။
dropbox - https://www.dropbox.com/s/wgoun38ql3w0g51/Mr.AD%20-%20Ringtone%20Randomizer.apk
copy - https://copy.com/wk8YEHVik83T
တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ရောက်ရှိလာမည့် မုန်တိုင်း ၂ လုံး – 30W နှင့် 31W
လက်ရှိအချိန်တွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းသို့ ရောက်ရှိလာသည့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း(30W – THIRTY)မှာ အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ဝင်ရောက်ကာ ဗီယက်နန်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနှင့်၊ ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတို့ကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့အတွင်း၌ ပိုမိုအားကောင်းလာမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း တနင်္သာရီတိုင်းအား မြိတ်မြို့အနီးမှ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း(TS အဆင့်ဖြင့်) ဖြတ်သန်းပြီး ကပ္ပလီပင်လယ်သို့ နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် ရောက်ရှိလာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။
(မြိတ်မြို့နှင့် အနီးတစ်ဝိုက်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်အတွက် အထူး သတိပြုစောင့်ကြည့်ပြီး နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက် မတိုင်မီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ဆောင်ရွက်ထားသင့်ပါသည်၊ အလားတူ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကမ်းနီး/ကမ်းဝေးပင်လယ်ပြင်တို့တွင် မိုးသက်လေပြင်း ကျရောက်နိုင်မည့် အန္တရာယ်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ဆောင်ရွက်ထားသင့်ပါသည်)
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 30W ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်သို့ ရောက်ရှိပြီး မုန်တိုင်းငယ် အဆင့်သို့ ရောက်လာမည့် အချိန်နှင့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း HAIYAN(31W) တောင်တရုတ်ပင်လယ် တောင်ပိုင်းမှ တစ်ဆင့် ဗီယက်နန်ကမ်းခြေ၊ ဒါနန်းမြို့ အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၂ဝဝ ခန့်သို့ ရောက်ရှိလာမည့် နေ့ရက်နှင့်အချိန်ဖြစ်သော နိုဝင်ဘာလ ၁ဝ ရက်တွင် မြိတ်ကျွန်းစုဒေသ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် မိုးသက်လေပြင်းများ ကျရောက်နိုင်သည့် အခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြိုတင် အသိပေးတင်ပြလိုပါသည်။(ပုံတွင်ကြည့်ပါ)
နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ဝ၉း၃ဝ နာရီ – JTWC သတိပေး ထုတ်ပြန်ချက် အမှတ်-၈ (လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 30W၏ လက်ရှိ အခြေအနေ)
05/00Z (TROPICAL DEPRESSION 30W (THIRTY) WARNING NR 008- 030 knots)
TROPICAL DEPRESSION 30W (THIRTY) WARNING #8
050000Z POSIT: NEAR 10.8N 119.2E
MOVING 285 DEGREES TRUE AT 20 KNOTS
MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT: 13 FEET
05/00Z, WINDS 030 KTS, GUSTS TO 040 KTS
05/12Z, WINDS 035 KTS, GUSTS TO 045 KTS
06/00Z, WINDS 045 KTS, GUSTS TO 055 KTS
06/12Z, WINDS 055 KTS, GUSTS TO 070 KTS
07/00Z, WINDS 040 KTS, GUSTS TO 050 KTS
08/00Z, WINDS 030 KTS, GUSTS TO 040 KTS
09/00Z, WINDS 025 KTS, GUSTS TO 035 KTS
10/00Z, WINDS 025 KTS, GUSTS TO 035 KTS
မုန်တိုင်း(၂)လုံး အနက် HAIYAN(31W)မှာ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း(TS) အဆင့်သို့ ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပြီး ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းတွင် အင်အား အကောင်းဆုံး(အဆင့်-၄) တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဆင့်ဖြင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းအား နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက် ညပိုင်းတွင် ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။